Johani 18 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mashoko Akanaka Akanyorwa naJohani 18:1-40
Judhasi anotengesa Jesu (1-9)
Petro anoshandisa bakatwa (10, 11)
Jesu anoendeswa kuna Anasi (12-14)
Petro anoramba Jesu kekutanga (15-18)
Jesu pamberi paAnasi (19-24)
Petro anoramba Jesu kechipiri nekechitatu (25-27)
Jesu pamberi paPirato (28-40)
“Umambo hwangu hahusi hwenyika ino” (36)
18 Paakanga ataura izvi, Jesu akabuda nevadzidzi vake akayambuka Bani reKidroni*+ akapinda mumunda waiva* mhiri kwacho nevadzidzi vake.+ 2 Judhasi, mutengesi wake, aizivawo nzvimbo yacho, nekuti Jesu aiwanzoenda ikoko nevadzidzi vake. 3 Saka Judhasi akauya neboka revarwi nevarindi vevatungamiriri vevapristi nevevaFarisi, vakaenda ikoko nemazhenje emoto nemarambi nezvombo.+ 4 Jesu aiziva zvese zvakanga zvava kuda kuitika, saka akamira pamberi pavo akati: “Muri kutsvaga ani?” 5 Vakamupindura kuti: “Jesu wekuNazareta.”+ Iye akati kwavari: “Ndini.” Mutengesi wake Judhasi, akanga akamirawo navo.+ 6 Jesu paakati kwavari, “Ndini,” vakasudurukira shure, vakawira pasi.+ 7 Saka akavabvunzazve kuti: “Muri kutsvaga ani?” Ivo vakati: “Jesu wekuNazareta.” 8 Jesu akapindura kuti: “Ndakuudzai kuti ndini. Saka kana muri kutsvaga ini, regai varume ava vaende.” 9 Izvi akazviita achizadzisa zvaakanga ataura zvekuti: “Pane vaya vamakandipa handina kurasikirwa kana nemumwe chete.”+ 10 Simoni Petro, uyo aiva nebakatwa, akabva arivhomora, akacheka nzeve yekurudyi yemuranda wemupristi mukuru, ikabva.+ Muranda wacho ainzi Makosi. 11 Asi Jesu akati kuna Petro: “Dzorera bakatwa rako mumuhara maro.+ Ndingarega here kunwira mukapu yandakapiwa naBaba?”+ 12 Varwi uye mutungamiriri weuto nevarindi vaishandira vaJudha vakabva vabata Jesu, vakamusunga. 13 Vakatanga kumuendesa kuna Anasi, nekuti aiva tezvara vaKayafasi,+ uyo akanga ari mupristi mukuru gore iroro.+ 14 Kayafasi ndiye uya wekupa vaJudha zano rekuti zvaizovabatsira kuti munhu mumwe chete afire vanhu.+ 15 Simoni Petro akanga achitevera Jesu aine mumwe mudzidzi.+ Mudzidzi iyeye aizivikanwa nemupristi mukuru, uye akapinda naJesu muchivanze chemupristi mukuru, 16 asi Petro akanga akamira kunze, pedyo nepasuo. Saka mumwe mudzidzi wacho, uya aizivikanwa nemupristi mukuru, akabuda akataura nemuchengeti wesuo, ndokupinza Petro mukati. 17 Mushandi wechisikana uyo aiva muchengeti wesuo, akabva ati kuna Petro: “Hausi mumwe wevadzidzi vemurume uyu here iwe?” Iye akati: “Handisi.”+ 18 Varanda nevarindi vakanga vakamira vachidziya mazimbe emoto wavakanga vabatidza, nekuti kwaitonhora. Petro akanga akamirawo navo achidziya moto. 19 Saka mupristi mukuru akabvunza Jesu nezvevadzidzi vake uye nezvekudzidzisa kwake. 20 Jesu akamupindura kuti: “Ndakataura kunyika pachena. Ndaigara ndichidzidzisa musinagogi nemutemberi,+ munoungana vaJudha vese, uye handina chandakataura pachivande. 21 Muri kundibvunzirei? Bvunzai vaya vainzwa zvandaivataurira. Ivava vanoziva zvandaitaura.” 22 Paakanga ataura izvozvo, mumwe murindi akanga akamira pedyo akarova Jesu nembama kumeso,+ akati: “Ndiwo mapinduriro aunoita mupristi mukuru iwayo?” 23 Jesu akamupindura kuti: “Kana ndataura zvakaipa, pupura zvakaipa zvacho; asi kana zvandataura zvakarurama, uri kundiroverei?” 24 Anasi akabva amuendesa akasungwa kuna Kayafasi mupristi mukuru.+ 25 Simoni Petro akanga akamira ipapo achidziya moto. Vakabva vati kwaari: “Iwe hausi mumwe wevadzidzi vake here?” Iye akaramba, akati: “Handisi.”+ 26 Mumwe wevaranda vemupristi mukuru, hama yemurume uya wekuchekwa nzeve naPetro,+ akati: “Hausiri iwe here wandaona mumunda uinaye?” 27 Asi Petro akarambazve, jongwe rikabva rarira pakarepo.+ 28 Vakabva vabva naJesu kuna Kayafasi, vakaenda naye kumuzinda wagavhuna.+ Iye zvino kwakanga kwava kuchena. Asi ivo pachavo havana kupinda mumuzinda magavhuna, kuti vasasvibiswa,+ vazokwanisa kudya Paseka. 29 Saka Pirato akabuda panze pavaiva, akati: “Munhu uyu muri kumupomera mhosva yei?” 30 Vakamupindura vachiti: “Dai munhu uyu anga asina mhosva yaakapara tingadai tisina kuuya naye kwamuri.” 31 Saka Pirato akati kwavari: “Mutorei imi mumutonge maererano nemutemo wenyu.”+ VaJudha vakati kwaari: “Isu hatibvumirwi nemutemo kuuraya munhu.”+ 32 Izvi zvakaitika kuti zvizadzise zvakanga zvataurwa naJesu zvairatidza mafiro aakanga ava kuda kuita.+ 33 Saka Pirato akadzokerazve mumuzinda, akashevedza Jesu, akati kwaari: “Ndiwe Mambo wevaJudha here?”+ 34 Jesu akapindura kuti: “Uri kubvunza izvi iwe pachako here, kana kuti pane vanhu vakuudza nezvangu?” 35 Pirato akapindura kuti: “Ndiri muJudha here ini? Vanhu verudzi rwako nevatungamiriri vevapristi ndivo vakuunza kwandiri. Wakaitei?” 36 Jesu akapindura kuti:+ “Umambo hwangu hahusi hwenyika ino.+ Dai Umambo hwangu hwaiva hwenyika ino, vateveri vangu vangadai varwa kuti vaJudha varege kundisunga.+ Asi zviripo ndezvekuti, Umambo hwangu hahubvi panyika ino.” 37 Saka Pirato akati kwaari: “Saka uri mambo here?” Jesu akapindura kuti: “Iwe ndiwe uri kutaura kuti ndiri mambo.+ Nekuti izvi ndizvo zvandakaberekerwa, uye ndizvo zvandakauyira munyika, kuti ndipupure chokwadi.+ Munhu wese ari kudivi rechokwadi anoteerera inzwi rangu.” 38 Pirato akati kwaari: “Chii chinonzi chokwadi?” Paakanga ataura izvi, akabuda zvakare akaenda kuvaJudha, akati kwavari: “Ndiri kumushayira mhosva ini.+ 39 Zvakare, mune tsika yekuti ndinofanira kukusunungurirai mumwe munhu paPaseka.+ Saka munoda kuti ndikusunungurirei Mambo wevaJudha here?” 40 Vakabva vashevedzerazve vachiti: “Hatidi munhu uyu; toda Bharabhasi!” Bharabhasi wacho akanga ari gororo.+
^ Kana kuti “rwizi rweKidroni.”
^ Kana kuti “mubindu raiva.”